Philips Shaver HP6342 2x 1.5 V – SUNNY eSTORE
Best Price Items
Philips Shaver HP6342 2x 1.5 V
PhilipsSKU: HA-PHIL-NOA-3252 (S048)
No Power use. This is2x battery only use. Safe shaving system. Comb attachment Luxury pouch. Opti-start cap, Safe shaving system, Slim ergonomic design Wet & Dry use.
Small shaving head
Shaving head - Single foil shaver
Voltage - 2x 1.5 V
Number of shaving foils - 1
With this all-round shaver you can shave your whole body quickly, easily and safely. The secret is the small shaving head that cuts quickly while protecting your skin. A soft and smooth feeling after every use!
The gentle small shaving head protects your skin leaving it smooth and soft
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုနဲ့ လှပကျော့ရှင်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံးကူညီပေးမဲ့ အမျိုးသမီးသုံး Lady Shaver ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Philips အမှတ်တံဆိပ် ဘက်စုံသုံး Electric Shaver အမွေးအမျှင်ရိတ်စက်ကို အသုံးပြုပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့အမွေးအမျှင်တွေကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာနဲ့ လုံခြုံစိတ်ရစွာ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကလေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ သင့်ရဲ့နူးညံ့တဲ့အရေပြားကို မထိခိုက်အောင် အသေအချာ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ စက်ရဲ့ဓားသွားခေါင်းဒီဇိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမွှေးအမျှင်တွေကို လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးမှာဖြစ်ပြီး အရေပြားကို လုံးဝပွန်းရှမှုမရှိတာကြောင့် အသုံးပြုပြီးတိုင်းမှာ နူးညံ့ချောမွတ်တဲ့ ခံစားချက်ကိုသာ ရရှိစေမှာပါ။ Wet & Dry အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် ရေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဆပ်ပြာနဲ့ ရေကြောင့် ချော်ထွက်ပြုတ်ကျတာမျိုးမဖြစ်အောင် လက်ကိုင်ကို ကုပ်တွယ်အားကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဘတ္ထရီအသုံးပြုအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကို စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ ရေချိုးခန်းထဲမှာလည်း ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ AA အရွယ်အစား ဓာတ်ခဲနှစ်လုံးနဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုပြီးချိန်မှာ အလွယ်တကူသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်အောင် ဘရပ်ရှ်ငယ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ လိုအပ်သမျှ အခြားသောတွဲဖက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုုးကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။